2GIS အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（92.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် 2GIS: Offline map & Navigation
သည်မြေပုံနှင့် GPS သွားလာမှုနှင့်အတူလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာသည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည် - မြို့တော်ဒေတာဘေ့စ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးလေယာဉ်, မြေအောက်ရထား, သို့မဟုတ် Roaming Zone တွင်အသုံးပြုပါ။
ခရိုင်ဆေးရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်စာတိုက်တစ်ခုရှိသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများဖြင့်ကဖေးသို့မဟုတ်0န်ဆောင်မှုစင်တာကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ အဖွင့်နာရီနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုပြလိမ့်မည်။
သင်ကားမောင်းနေပါက 2GIS သည်သင့်အားလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းညွှန်များနှင့်အသံညွှန်ကြားချက်များကို အသုံးပြု. သင့်အားသတိပေးလိမ့်မည် ။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများနှင့်လမ်းများထဲသို့လမ်းများပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။ သင်လမ်းမှသွေဖည်လျှင်လမ်းကြောင်းကို update လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ကားရပ်နားရန်နေရာရှာရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာသည်ကုမ္ပဏီ 2.5 သန်းသို့မည်သို့ဝင်ရမည်ကိုသိသည်။ အကယ်. သင်သည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်ကားအတွက်လမ်းကြောင်းလမ်းညွှန်များကိုရှာဖွေနေပါက 2GIS သည်အလွန်တံခါးကိုလမ်းကိုပြလိမ့်မည်။
) စျေးများ, ကဖေးများ, အစားအသောက်ဆိုင်များမှ ATM စက်များမှအရာအားလုံးကိုပြသသည်။ အချိန်ကိုချွေတာရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုရှာပါ။
2GIS သည်ကားအညွှန်းရှာဖွေရန်သာမကအသုံးဝင်သောအများပြည်သူအကူးအပြောင်းလမ်းညွှန်လည်းဖြစ်သည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အချိန်ဇယားနှင့်အွန်လိုင်းလမ်းကြောင်းများမှာဘတ်စ်ကားများ, တွန်းလှန်မှုများ, Minibes နှင့် Trams ။ ဘတ်စ်ကားသည်မြေပုံပေါ်တွင်အချိန်မှန်နှင့်မှန်ကန်သောဘတ်စ်ကားရောက်ရှိချိန်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှိကြောင်းသိရှိရန်ရှာဖွေပါ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်အွန်လိုင်းရှိစီးတီးဘတ်စ်ကားမြေပုံ ထို့အပြင် 2GIS သည်သင့်အားတက္ကစီဈေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်။ သင်လိုအပ်သည့် Metro မှထွက်ပေါက်ကိုပြောပြရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
အဘိဓာန်သွားသောရေတပ်မှထွက်ခွာရန် Metro မှထွက်ရန်ပြောလိမ့်မည်။
b> burkian Navigator - သင်သွားနိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်လမ်းခင်းပေးသည် ခြေလျင်။ ဘတ်စ်ကား, မက်ထရို, ရထား, ကေဘယ်လ်ကားနှင့်မြစ်လမ်းကြောင်းများဖြင့်သွားရန်ရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
Kazakstan, ယူကရိန်း, ယူအက်စ်အေတို့အကြောင်းအသေးစိတ်လမ်းညွှန်များ, ကဖေး, ဘား, စားသောက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်, ကုန်ကြမ်းများ, သင်၏တည်နေရာတွင်သို့မဟုတ် wifi နှင့်အတူနေရာများကိုရှာပါ။ မော်စကိုသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းသို့လမ်းကြောင်းစီစဉ်သူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ 2GIS Travel Navigator သည်သင်၏ခရီးသွားလာခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကားဖြင့်သို့မဟုတ်ခြေလျင်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်းရှိမရှိ။
> 2GIS သည်ဆောက်လုပ်ရေးထုတ်ကုန်များနှင့်အော့ဖ်လိုင်းစတိုးဆိုင်များမှဆောက်လုပ်ရေးထုတ်ကုန်များနှင့်တာယာများကိုရှာဖွေသည်။ ၎င်းသည်စတိုးဆိုင်များရှိကုန်ပစ္စည်းများရရှိမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးစျေးနှုန်းများမပေးဘဲကုန်ပစ္စည်းများ0ယ်ရန်စတိုးဆိုင်များတွင်စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ယခုအခါဆေးဆိုင်များတွင်ဆေးဝါးများရှာဖွေခြင်းကို 2GIS တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်ဆေးဝါးများရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆေးဝါးများအတွက်စျေးနှုန်းများကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်။ ဆေး0ယ်ရန်စျေးနှုန်းချိုသာသောနေရာတွင်ရှာပါ, ဆေးဆိုင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိပြီးဤဆေးဆိုင်တွင်ဆေးဝါးများပေးပို့ခြင်းရှိ,
သင်၏ဒေသ (သို့) မြို့တွင်အစားအစာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးဤစားနပ်ရိက္ခာ0န်ဆောင်မှုထူထောင်ရေးဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုလည်းဖတ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားအသောက်ဆိုင်များမှပေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းထားပါသည်, စူပါမားကတ်မှစူပါမားကတ်မှထုတ်ကုန်များကိုမှာယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ bon bon appetit!
ရုရှား, Saint Petersburg, Saint Petersburg, Saint Petersburg, Novosibirsk, Ekatorsnoyarg, Krasnoyararsk, chelybinsk, ikask, ufa, ufa, ufa, ummsk, ufa, ! ဤနေရာတွင်သင်၏မြို့ကိုရှာပါ https://2gis.ru/
Dubai Censide) Abu Dhabi Ect ။
STAV, Khariv, Odessa, Pavlodar, Semey, Aktau, Aktau, Nur-Sultan, Bishkek, Karagau, kostanay, kostanay, kostanay, kostanay, kostanay, kostanay, kostanay, kostanay, kostanay, ကေို,
vkontakte - https - http: http: //twitter.com/2GIS
ဘာအသစ်လဲ 2GIS: Offline map & Navigation 5.48.0.379.14